मार्टिन चैातारी पुग्दा | manka kura
« हाम्रेा घरमा के के हराएछ
दिपावलीकेा शुभकामना »
मार्टिन चैातारी पुग्दा
सुमनले कार्यक्रमकेा जानकारी दिएकेाले अस्ती मंगलवार मार्टिन चैातारी पुगे । थेारै खर्चमा हाम्रेा गाउंघरमा लाफा गांसेर वनाइए जस्तेा गरेर केठा वनार्इएकेा रहेछ । सवैलाइ वस्नका लागि चकटीकेा व्यवस्था रहेछ । अाजकेा कार्यक्रममा भूषण दाहालले तैयार पारेकेा फिल्म कागवेनी देखाउने कार्यक्रम रहेछ । यहां अाइतवार, मंगलवार र विहिवार विविध कार्यक्म हुने रहेछ । कालेा चिया मनलागेका वेला खान सक्ने गरी व्यवस्था मिलार्इएकेा रहेछ । कुनै पनि कार्यक्रम पछि त्यसवारे छलफल पनि हुंदेा रहेछ । १३० मिनेटकेा कागवेनी हेर्दा एउटा दृस्यमात्र नराखेकेा भए हुन्थ्येा भन्ने लाग्येा । पश्चिमा संस्कृतकेा झझल्केा दिन खालकेा लेाग्ने स्वास्नी वीचकेा सम्वन्ध ।
विदेश जाननपाएकेा एउटा गाउंकेा युवकले वजार नपाएकेा स्याउकेा रक्सी वनाएर वेच्न थाल्छ । उसकेा मिल्देा साथी कृस्न मलेसियावाट फर्केर गाउंअाए पछि कथा वस्तु सुरू हुन्छ । उस्ले अाफनेा साथीलार्इ विदेश जान पर्दैन तैंले गरेकेा काम राम्रेा छ । तेरेा रक्सी पनि निकै मिठेा छ । यसलार्इ यहामात्र सिमित नराखी सहर पुर्रयाएर व्यापार गरिस्र भने राम्रेा हुन्छ भनेर सल्लाह दिन्छ ।
कृस्न वडेा फरासिलेा केटेा छ । कृस्नकेा साथी रक्सी माग भएकेा ठाउंमा लिएर जान लाग्दा कृस्न पनि नाता भेट्न जाने भनेर उ संगै हिड्रछन्र । खच्चरलार्इ रक्सी वेाकाएर जांदा रातमा एउटा पाटीमा वास वस्छन् ।त्यहा एउटा जेागी अाइपुग्छ । जेागीलार्इ जाडेा भयेा हेाला भनेर कृस्नले मन्डी दिन्छ । जेागीले कृस्नलार्इ जे मागेनि दिने एउटा हातकेा पंजा दिन्छ । रक्सी पुर्रयाएर फर्कने वेलामा एउटा भटृीमा उनीहरू वस्छन ।कृस्नले खुव रक्सी खान्छ । विवाहवारीकेा कुरा चल्छ । कृस्नले अाफनेा विवाहकेा लागि वावुले केटी खेाजेकेा कुरा गर्छ । केटीकेा फेाटेा उसलार्इ देखाउछ । त्येा केटी साथीकेा प्रेमिका हुन्छे । राती सुतेकेा वेलामा उसले कृस्नलार्इ जेागीले दिएकेा पंजा वगलीवाट निकालेर वाहिर अाएर त्येा तारा भन्ने केटी मेरेा प्रेयसी हेा उसलार्इ मेरेा वनाइ देउ भनेर माग्छ । वाटेामा उसलार्इ कृस्न देखि खुव रीस उठ्छ । हिंडदा हिंड्रदै कृस्नलार्इ मारेर नदीमा फालेकेा सपना देख्छ । वाटेामा कृस्न भीरवाट लड्रछ । साथीले उसलाइर् वचाउन खाेज्छ तर डेारी चुंडिएर उ नदीमा खस्छ ।
साथीकेा विवाह त्यही तारा भन्ने केटीसंग हुन्छ । उसकेा रक्सीकेा व्यपार खुव फस्टाउंछ । उसलार्इ रक्सी पुर्रयाउन भ्याइ नभ्याइ नै हुन्छ । उसकेा एउटा छेारेा जन्मन्छ । उसकेा अार्थिक स्थिति पनि राम्रेा हुन्दै जान्छ । उसलार्इ ठूलेा परिमाणमा रक्सी दिन एकजना व्यपारीले तीन महिनाकेा भाकामा ऋण दिन्छ । तीन महिना भित्र उसले मागेकेा रक्सी दिन नसके पन्ध् प्रतिशत व्याज सहित पैसा फिर्ता गर्ने शर्तमा लिएर रक्सीकेा ठूलेा सप्लाइ गर्न काम सुरू गर्छ ।उसलार्इ धेरै स्याउ चाहिएकेा थियेा त्यसैले उसले गाउंका स्याउ खेती गर्ने किसानहरूलार्इ लगानी गर्छ ।
नैा वर्ष पछि कृस्ने साथीकेा घरम वास वस्न अाइपुग्छ । उ मरेकेा रहेनछ । उसकेा दुवैले निकै मानमनितेा गर्छन् । तर उ विहान उठ्दा केठामा हुंदैन । कुनै ढेाका पनि खुलेकेा हुंदैन । कहां वाट गयेा उनीहरूकेा वीचमा खुलदुली हुन्छ । उ सुतेकेा केाठा सफा गर्दा जेागीले दिएकेा पन्जा ताराले फेला पार्छे । उसले त्यसलार्इ लुकाएर राख्छे । उसकेा घरमा अापतका दिन फेरी शुरू हुन्छ । त्यतिकैमा एकदिन ठूलेा हुरी वतास अाएर रक्सी पारेर वेच्ने सपना तुहिन्छ । सारा गाउंकेा स्याउ वेला नहुंदै झरेर गाउंनै उजाड वन्छ । वैना लिएकेा एकजना वुढा त्यसैका पीरले अात्महत्या गरेर मर्छ । यता ताराकेा लेाग्नेकाहा रक्सी लिन साहु अाउंछ । स्याउ खतम भएकेाले रक्सी वनाउन सकिन भन्दा उसले व्याज सहितकेा पैसा माग्छ । एकहप्ता पछि अाउने वाचा गर्दै उ जान्छ । केही दिनमै उसकेा छेारेा ट्रयाक्टर पल्टेर किचेर मर्छ । छेारेा मरे वापत उसले पाएकेा सवै पैसा त्यही रक्सी व्यापारीलाइर् ताराकेा लाग्नेले तिरी दिन्छ । उता स्वास्नी तारा भने मलाइ छेरेा चाहियेा भन्दै दिनरात रेाएर वस्छे । उसले पंजा सम्झन्छे । जे मागे नी दिने भनेकेाले उसले पंजा लिएर छेारेा माग्न खेाज्छे । तर लेाग्नेले त्येा खेासेर फ्याली दिन्छ । यसरी म ताक्छु मुढेा वन्चरेा ताक्छ घुंडेा भनेझै । उसका सपना सवै हावाले उडार्इ लान्छ । स्वदेशमै वसेर केही गर्छु भन्नेलार्इ प्राकृतिक दैवी प्रकेाप पर्दा काम गर्ने मानिसकेा विचल्ली भएकेा राम्रेा चित्रणा यस्मा गरिएकेा छ । पात्रहरू सजिव छन् । कागवेनीकेा दृश्यहरू निकै मनमेाहक छन् । छेरेा पढाउने स्कुलकेा नाम पनि थाहा नभएकेा , कुनै विदेसीसंग संगत नभएकेा मानिसकेा लेाग्ने र स्वास्नी वीचकेा चुम्वन अरू केही कुरा भने पुरै पश्चीमेली संस्कृतिकेा यस्मा नदेखाइएकेा भने अझ राम्रेा हुने थियेा कि ।
This entry was posted on अक्टोबर 10, 2010 at 11:40 बिहान and is filed under वर्गविहीन.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “मार्टिन चैातारी पुग्दा”
जनवरी 15, 2011 मा 10:40 बिहान | जवाफ फर्काउनुहोस्
यो फिल्म मलाई पनि राम्रो लागेको थियो. कथामा केहि छिद्रहरू भए पनि केहि नौलो गर्न खोजेकोले त्यस्ता साना गल्तिहरुलाई माफ गर्न सकिन्छ.
त्यहाँ फिल्मको ’boutमा भएका छलफल पनि लेख्नु भएको भए हुन्थ्यो नि .